Trapit: Fampandoroana votoaty manan-tsaina | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 16, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Trapit dia mitazona ny fantsonao feno atiny vaovao sy mahaliana manodidina ny famantaranandro. Miaraka amin'ny mpihaino anao ny marikao, na aiza na aiza alehany. Trapit dia manome anao fitaovana hividianana atiny avo lenta mahaliana avy amin'ny lafin'ny Internet sy avy amin'ny arisivanao atiny am-boalohany izay hitazomana ny mpihaino anao hiverina bebe kokoa. Ny Ivotoerana Fanarenana votoatin'ny Trapit dia mampiasa faharanitan-tsaina solon-tsaina mandroso hametrahana automatique ny fahitana sy ny fanatontosana ny haino aman-jery sy ny atiny avy amin'ny Internet hanitatra sy hanohanana ny tantaran'ny marikao.
Trapit dia ahafahanao manangana sy mitantana fanangonana mavitrika sy mahasarika amin'izay lohahevitra rehetra mifandraika indrindra amin'ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny fampiasana interface tsotra iray hamoahana amin'ny apps, mailaka, tambajotra sosialy na tranokala amin'ny fotoana tena izy na amin'ny fandaharam-potoana.
Ahoana no fiasan'ny Trapit
Discover - Alao amin'ny tranomboky tsy mitsaha-mitombo an'i Trapit izay misy loharanom-pahalalana manampahaizana maherin'ny 100,000, na ampio ireo loharano ao anatiny ao anaty fangaro. Manomboka amin'ny lahatsoratra bilaogy sy lahatsoratra an-gazety ka hatrany amin'ny infografika na horonan-tsary dia tsy ny atiny malaza indrindra ihany no hitan'i Trapit fa ireo vatosoa miafina very tao anaty korontana.
Trap - Farito ny atiny misy ifandraisany indrindra amin'ny mpihaino anao - ary TRAPRY izany - amin'ny fotoana tena izy. Trapit dia mianatra momba ny zava-dehibe indrindra amin'ny mpihaino anao ary manitsy amin'ny alàlan'ny fampifanarahana sy fanadiovana ireo safidin'ny atiny mifanaraka amin'izany. Azonao atao mihitsy aza ny manivana ny valiny amin'ny alàlan'ny teny lakile, kalitao, tag ary na ny toerana misy anao aza, izay azo antoka ihany no aseho.
Vonjeo - Nozarain'i Trapit ity atiny ity - mandeha ho azy - amin'ny media sosialy, taratasim-mailaka, rindranasa finday, tranokala - na aiza na aiza no tian'ny mpihaino anao handany atiny. Ianao no mamaritra ny toerana tsara indrindra - sy ny fitaovana tsara indrindra - ary i Trapit no hitantana ny ambiny
Trapit dia hanome webinar isan-kerinandro azonao atao ny misoratra anarana ary mahita fampisehoana. Register izao!
Tags: fahaizana artifisialycurationfandefasana atinyfanamarihana votoatymanolotra atinyfahiratan-tsainatrapitvette
Marketing amin'ny atiny B2C tamin'ny 2013